Manandratra Ny Asa Fanaovan-Gazetin’ny Olom-pirenena Any Amin’ny Tanàna Haolon’i Daraya Any Syria Ilay Boky Manaraka Eo · Global Voices teny Malagasy
Manandratra Ny Asa Fanaovan-Gazetin'ny Olom-pirenena Any Amin'ny Tanàna Haolon'i Daraya Any Syria Ilay Boky Manaraka Eo
Voadika ny 06 Novambra 2016 3:11 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, عربي, עברית, Italiano, Español, Türkçe, English
Kapoka mafy ho an'ireo Syriana maro sy ireo mpanohana ny revolisiona ny vaovaon'ny fahalatsahan'i Darya ho teo an-tànan'i Assad, tamin'ny 25 Aogositra 2016. Talohan'ny nanombohan'ny fikomiana tamin'ny 2011, sy talohan'ny nanaovan'ny fitondran'i Assad azy fahirano, dia nisy olona 200.000 i Darya, fa nanomboka tamin'ny 25 Aogositra dia nidina be manakaiky ny aotra izany isa izany.
Ny antony nahatonga an'i Daraya ho mariky ny hery dia noho ny lova napetrany ho foiben'ny hetsika tsy amin-kerisetra nanoherana ny fitondran'i Assad. Izany no nahatonga ny mponin'i Daraya ho voaray tahaka ny olona mahery fo rehefa tonga tany Idlib, tanàna eo an-tànan'ny mpikomy. Nisy olona iray niteny tamin'i Mohammad Abou Faris, mpitsoa-ponenana avy any Daraya, hoe “Avy any Daraya ianareo, Andriamatoa. Manana ny zavatra rehetra ianareo. Ianareo no mpampianatra anay.”
Namoaka mpitolona malaza betsaka ilay faritra manodidina an'i Damaskosy, toa an-dry Yahya Sherbaji sy ilay mpanjaitra 26 taona, Ghiyath Matar, nantsoina hoe “Gandhi kely” izay nilaza fa :
Tsy hakanosàna na halemena no nifidiananay ny tsy fanaovana herisetra, fa fandresen-dahatra ara-moraly ; tsy te- hahazo fandresena amin'ny fanapotehana ny firenena izahay.
Samy voasambotry ny fitondrana Assad i Sherbaji sy Matar tamin'ny 6 Septambra 2011. Tsy mbola fantatra izay nanjo an'i Sherbaji hatramin'ny androany, fa i Matar kosa dia fantatra fa maty telo andro taorian'ny nisamborana azy. Naverin'ny fitondrana tamin'ny fianakaviany ny vatany, miaraka amin'ny porofo mazavan'ny fampijaliana.
Ny zava-nanjo ireo mpikatroka mafana fon'i Daraya, ny fijaliany tamin'ny fahirano, ary ny faharavàny amin'izao fotoana izao dia namadika izany ho mariky ny horohoron'ny ady sy famoizam-po. Araka ny hevitry ny vondronà mpanao gazety, na dia izany aza, dia tsy voatery ho izay no làlana.
Enab Baladi laharana faha-236, fotoana fohy taoriana'ny naharavan'i Daraya. ” Ny sisan'i Daraya” no vakin'ny lohateny. Loharano: Enab Baladi.
Enab Baladi: Mitantara ny Revolisiona
Enab Baladi no anaran'ilay vondrona na “Voaloboky ny fireneko” amin'ny teny Arabo. Efa niasa isan-kerinandro izy io hatramin'ny volana Marsa 2011 fa nisy fahatapahana kely roa herinandro tamin'ny faran'ny volana Aogositra 2012, tamin'ny fotoanan'ny vonomoka tany Daraya, niafarana taminà famonoana 400 mahery nataon'ny miaramilan'i Assad, izay nandrava ihany koa ny biraon'ny Enab Baladi.
Isan'ireo gazety Syriana maimaim-poana malaza indrindra ny Enab Baladi. Ny volana voalohan'ny revolisiona no namoahana azy voalohany, amin'ny fiteny Arabo mazava ho azy, fa misy ihany koa amin'ny teny Anglisy. Noho izany, loharano iray sarobidy hanampiana ny any ivelany mba hahalala ny fivoarana anatiny any Syria nanomboka tamin'ny 2011 izy.
Eto no miditra i Sergio Perez. Nandritra ny sivy taona lasa, dia izy no nitondra ny Bósforo Libros, trano kely fanontana gazety tao Espaina izay mifantoka indrindra amin'ny adin'ny Palestiniàna. Manangom-bola amin'ny alàlan'ny indiegogo sy namlebee i Perez amin'izao fotoana izao mba handrafetana ireo lahatsoratry ny Enab Baladi ( sy ny tantaran'ilay vondrona ) sasany ho boky.
Hoy ny fanazavàny ao amin'ny indiegogo:
Na teo aza ny revolosiona nataony dia voatampim-bava faobe ny feon'ireo Syriana.
Nampanginin'ny habibian'ny fitondrana lozabe izay niditra tamin'ny fampiharana ny lisitra rehetra mitanisa ny hadalan'ny olombelona mba hamongorana izany feo izany ry zareo, any Syria.
Any ivelan'i Syria, dia nampanginin'ny tsy firaharahian'ny vondrona iraisam-pirenena, ary koa ny antso lavareny atao amin'ireo “manampahaizana” Tandrefana izay manazava ny momba an'i Syria any amin'ny biraony sy ny solosaina findainy , izay tsy mamela ny feon'ny Syriana hivoaka mihitsy, sanatria, mba hitsipaka ny vokatra madio tsy misy pentin'ireo fifandirana tsikeran-dry zareo.
Amin'ity fanentanana fanangonam-bola ity, tanjonay ny hihaino ny Syriana miaraka. Ary sitrakay ihany koa ny hafa mba hihaino ny Syriana. Noho io antony io indrindra, tiana ny hanao boky iray hitantaràna ny fitroaran'ny Syriana amin'ny alàlan'ireo fitantaraàn'ny olom-pirenena navoaka tao amin'ny Enab Baladi.
Ireo mpanoratra ao amin'ny Enab Baladi, izay hifantina “ireo ampahan-dahatsoratra manandanja indrindra nosoratan'ireo olom-pirenena mpanao gazety” no “handamina” ny boky izy tenany. Ho maimaim-poana ao amin'ny aterineto ny boky—”maimaim-poana tanteraka ny mamaky, ny misintona, ny mampiakatra, ary ny mizara.” Hisy ihany koa ny fanontàna ho boky ho an'ireo te-hividy izany amin'ny endriny taratasy. Izany no ampiasàna ny vola avy amin'ilay fanentanana, mizara telo lehibe ny saran'ny fandaniana hoy ny haba-tranonkala :
- Ny 1/3-n'ny vola voaangona dia hivantana any amin'ny Enab Baladi. Tena tsara raha manohy mamoaka lahatsoratra foana ry zareo, ary te-handray anjara izahay.
- Ny 1/3 handoavana ny fandikàn-teny. Tianay havoaka amin'ny teny Anglisy sy Espaniola ilay boky, fiteny be mpiteny indrindra maneran-tany ankoatra ny Shinoa ireo. Raha tsy ampy ny volantsika, dia homena tombon-dahiny ny teny Anglisy.
- Ny 1/3 hanampiana amin'ny famitàna ny boky ( ny endrika, ny sary ary ny fanontàna printy), hamphafantarana azy araka izay azo atao sy handefasana dika miovy ho any amin'ireo mpandray anjara. Tena ilaina mba hahazoana mpamaky marobe ny fampahafantarana. Tanjonay ny hikarakara resadresaka sy fampahafantarana ho an'ireo mpanoratra ao amin'ny Enab Baladi mba ho izy ireo no hizara ny asa-sorany voalohany sy ny traikefany.
Nataon'ny Enab Baladi Ity lahatsary manaraka ity hanazavàna ny tetikasa momba ilay boky :